सार्वजनिक भयो २५ बैंकको विवरण, कुन बैंकको नाफा कति घट्यो?
Fri, Sep 25, 2020 at 11:10pm
काठमाडौं, ३१ साउन। कोरोना कहरका कारण यतिबेला संसार नै आक्रान्त भएका बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले कोरोनाको रोकथामका लागि गरेको लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो ।
३ दिनदेखि लगातार घट्दै सुनकाे मूल्य, आज एकैदिन ताेलामा १२ सयले घट्याे
आज पनि प्रतिताेला १२ सयले घट्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
आज एकैदिन १७ सयले घट्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
नेपालगञ्ज भन्सारमा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा उत्साहजनक राजश्व सङ्कलन
डोटीमा पसलैपिच्छे एलपी ग्यासको फरक मूल्य, उपभोक्ता मारमा
आज प्रतिताेला ४ सयले बढ्याे सुनकाे मूल्य, कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
किङ्स कलेज र मिट भेन्चर्स सिंगापुरबीच सम्झौता
तीन करोड लागतमा अलैँची प्रशोधन उद्योग निर्माण, मङ्सिरबाट प्रशोधन थालिने
बिहीबार ताेलामा ९ सयले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीकाे कति ?
साेमबार प्रतिताेला ४ सय रूपैयाँले बढ्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
विषाक्त रसायन भेटिएपछि स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने पाँच कम्पनीलाई प्रतिबन्ध
आज पनि बढ्याे सुनचाँदीकाे मूल्य, कतिमा हुँदैछ काराेबार
एकैदिन ताेलामा ६ सयले बढ्याे सुनकाे मूल्य, चाँदीकाे कति ?
मंगलबार ३ सयले घट्याे सुनकाे मूल्य, कति छ आज ताेलाकाे ?
आइतबार पनि घट्याे सुनकाे मूल्य, तोलाको ९६ हजार एक सय रुपैयाँ कायम
कोरोना संक्रमणमुक्त भए उद्योगपति विनोद चौधरी
तीन सातायताकै सस्तो भयो सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे आज ?
आज पनि घट्यो सुनचाँदीको भाउ, तोलामा कतिले हुँदैछ कारोबार ?
बुधबार एकैदिन १ हजार २ सयले घट्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
एकैदिन फेरि ९ सयले बढ्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
फेरि बढ्यो सुनचाँदीकै भाउ, आजको मूल्य कति ?
उत्पादन घटाएर चुनढुङ्गा बेच्न थाले सिमेन्ट उद्योग
शुक्रबार घट्याे सुनचाँदीकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
निरन्तर घट्दै सुनकाे मूल्य, आज पनि प्रतिताेला ७ सयले घट्याे